Hyaluronic Acid ပါဝင်ပါသည်
တစ်စက်ဆိုလုံလောက်ပါပြီ: ဒီ concealer က coverage အားကောင်းပြီး ကြာရှည်ခံသလို ချွေးစိုလဲခံ ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူ့ရဲ့ အထိအတွေ့ က အရမ်းကိုပေါ့ပါးပြီး hyaluronic acid ပါလို့ အစိုဓာတ်ကိုလဲ ဖြည့်ပေးပါတယ်။
ဒီconcealer လေးကတော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ make-up အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အသုံးမပြုခင် ပုလင်းကို လှုပ်ပေးပါ.ပြီးနောက် မျက်လုံးတစ်ဖက်စီအောက်မှာ အစက်တစ်စက်စီချပေးပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့မှာဆိုရင် coverage အားကောင်းတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဖော့တုံး၊ brush (သို့) လက်ချောင်းလေးတွေကို သုံးပြီးဖြန့်ပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့ wide-awake lookလေးရအာင် မျက်လုံးထောင့်၊ နှုတ်ခမ်းအလယ်နဲ့ မျက်ခုံးအောက်ဘက်မှာ Concealerအနည်းငယ်ကို လိမ်းပေးပါ။
Weightless, sweatproof, ultra long-lasting concealer with moisturizing hyaluron. Apply and blend one drop for full coverage. Shake before use!